ILogoPond -I-Logopond ibonisa okona kulungileyo kumsebenzi wesazisi kwiwebhu yonke. Ilogo yomculi kuwo onke amanqanaba ophuhliso kunye neendawo zehlabathi rhoqo kule ndawo.
ILogolog -I-Logolog yibhlog malunga noyilo lwe logo.
I-logo yam Highbridge
tags: Uyilo oloyikekayo lwe logoEyona logo yoyilo yeyona nkampaniEyona logo ilungileyo kwi-IntanethiEyona nkonzo yoyilo ilogo kwi-IntanethiThenga ilogoThenga ilogouyilo lwexabiso eliphantsi onlineiilogo ezingabizi kwi-intanethiImvelaphi yelogo logo yoyiloisihlweleUyilo lwe logo yezixhobologo yezihlweleUyilo lwe logo yezihlweleUyilo lwelogo yewotshiiilogo ezihambisa abantu abaninziiifotoYila ilogologo yoyiloukhuphiswanoyenzelweUyilo lwelogo ye-intanethiuyilo njeUluhlu lweendawo zelogologouphawu lokonwabalogo yebhloglogo yoyilo lwenkampanilogo uyilo kukhuphiswanouphawu lwe-infographicimpembelelo yelogoiisayithi zelogologo yophandoiilogo zithwalaloungengeyelogoponduphawuizimvo zelogo yokuthengisabistro yeendabauyithenga phi ilogo
Douglas-Enkosi ngokusifaka kuluhlu lwakho.
I-FYI sisandul' ukuphehlelela uhlobo olutsha, olulunge ngakumbi lwe-'hybrid crowdsourcing' apho abathengi banokumema kwaye bahlawule abayili abathile ukuba bangenise ukhuphiswano loyilo - jonga upapasho lwethu lweendaba namhlanje: http://prwire.com.au/permalink/18300/design-contest-website-launches-hybrid-crowdsourcing-model-with-15-000-designers-2
Inqaku eliphambili kukuba oku kuthetha ukuba abaqulunqi bafumana intlawulo eqinisekisiweyo nokuba uyilo lwabo lukhethiwe. I-Crowdsourcing ayinyanzelekanga ukuba ibe ngophumeleleyo ithatha konke okanye, njengoko uyibeka, "ayilungelwanga abayili"! Ukuba unomdla wokwenza udliwano-ndlebe lwam okanye ukuqhuba iprojekthi yesifundo ngeDesignCrowd nceda uqhagamshelane nawe http://twitter.com/designcrowd 😉
Kwakhona, nantsi imithombo embalwa yoyilo lwelogo kwiwebhusayithi yethu.
Jun 7, 2010 ngo-9:28 AM
Ngelixa ndincoma isakhono sakho “kuyilo lwelogo” lukaGoogle, ndifumanisa ukwanda kunye nombhiyozo woyilo lwelogo oluphantsi lungathandeki. Iisayithi ozinikezeyo ngokulula zibonelela ngee-icon ezibukekayo (ezifana “negama lakho apha”), kungekho ngcinga icwangcisiweyo.
Ukutyhala iisayithi zelogo yokutyhala – ngelixa uthumela iingcebiso zokuqinisekisa ukuba ufumana uphawu “loqobo” – kuyahlekisa ukuba akuhoyi kancinane.
Uchanekile kwinqanaba elinye: uyayifumana into oyihlawulelayo. Nangona kunjalo, ndiyathemba ukuba abafundi bakho baya kuba benza inkuthalo ngakumbi ngaphambi kokuba banikezele ngelogo yabo njengenxalenye yokhuphiswano loyilo.
Inqununu, umlawuli oyilayo
Jun 7, 2010 ngo-11:07 AM
Yixabise impendulo (yenza ngokwenene) kwaye ndiyaqonda ukuba ii-arhente zophawu lwendawo esichengeni ziphantsi kobungqina bokubaluleka kwazo. Andilithandabuzi ixabiso lakho – ndikhe ndabona iifemu ezifana noKristian Andersen zithatha iinkampani ukusuka kwinto engekhoyo ukuya kumakhulu ezigidi zeedola – ezinye zazo zityala ukuqondwa kophawu lwazo.
Uyilo lwelogo luphantsi kohlaselo - alufani nayo nayiphi na enye inkampani esekwe kwiwebhu okwangoku. Sinabantu abafana noChris Anderson abakhwazayo "Mahala!". Iisayithi zokubamba iividiyo azikwazi ukukhuphisana neYouTube, iinkampani ze-Analytics ziye zazabalaza neGoogle, kunye neenkqubo zeCMS ezifana ne-squarespace ekhuphisana neWordPress.
Ndingama kwaye ndiphikisane “Akukho Special”, kodwa mna ngokobuqu ndisebenzise ezinye zezi nkonzo kwaye ndifumene iziphumo ezilungileyo kakhulu ngazo. Akukho ukuyifihla into yokuba njengokuba ungawathandi, ayakhula ngokuthandwa. Kwaye kwinkampani ebotshelelwe yimali kwaye engakwaziyo ukuthenga uphawu lobuchwephesha, kutheni ungayokuthenga ilogo enexabiso eliphantsi, ethambileyo? Ngebenze ngaphandle kwento enye.
Ndingathanda ukuba wenze iposti malunga nokuba kutheni unganqanda ezinye/ezininzi zezi nkonzo!
IGeniusRocket (www.geniusrocket.com), ekhokelwa nguMark Walsh owayesakuba ngu-AOL kwaye iqhutywa nguPeter LaMotte, inekhono lehlabathi lokufumana iilogo kunye nezinye iimfuno zoyilo.
Nov 2, 2010 ngo-4:25 AM
Sisanda kuqalisa indawo entsha yokhuphiswano loyilo lwelogo: http://www.logoarena.com
Nceda susa i-marvellogodesign kuluhlu lwakho kuba BUBUQHOPHI.Bona http://pondpad.com/forum/viewtopic.php?id=3856 kunyehttp://www.wordpressblue.com/2009/08/marvel-logo-designs/
Enkosi, uMichael! Ndizisusile kuluhlu kwaye ndongeze iCreattica.
Nov 30, 2011 ngo-3:43 PM
Lumkela uYilo lweLogo yoYilo olumangalisayo. Hlala kude xa bethatha iminyaka yokuphendula. Ayinamsebenzi kakhulu.
Ndisandula ukwenza ilogo nge http://www.logotypers.com Bawuthatha umzobo wam baza bawujikela kwilogo yobungcali ngeedola ezili-10 kuphela (kodwa kufuneka ulayishe umzobo, okanye i-ppt okanye into yokubakhokela)
Onjani wona ukuba mhle umbono! Ndongeze iiLogotypes kwicandelo layo. Enkosi!
Zonke izixhobo zoyilo loyilo lwelogo ziluncedo, uyilo olumangalisayo kunye nomboniso woyilo. Izinto ezintle ekwabelwana ngazo ngawe. Kuxatyiswa kakhulu kwaye ndiziva ndinombulelo ngokwabelana okuthandekayo.
Ndiyaluthanda olu luhlu. Inyani yokuba unikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhetha abantu kunye namakhonkco, wenze kakuhle…ngumgcini lo!
Enkosi kakhulu uGabriella!
omg, kuhle kakhulu
amakhonkco amahle, tnx
Jun 28, 2016 ngo-9:25 AM
Ilogo ngumfanekiso wesipili sophawu lwakho. Iresiphi yakho yokwenza ilogo inomdla kakhulu.
Ewe, i-logo ye-Nike ixabisa i-35 yeedola ekuqaleni kodwa ngoku ixabisa ngaphezulu kwe-600,000 yeedola. Kuyila ilogo elungileyo kuphela akunakuze kukuncede ukhulise ishishini lakho. Iinkonzo zakho kunye neemveliso kufuneka zibonise amandla elogo yakho.
Bendikhangela iikhonsepthi zoYilo lweLogo zokwenza uphawu olulodwa kwaye ndifumene iposti yakho. Enkosi kwesi sithuba. Ineengcinga ezilungileyo zokusebenzisa kwiprojekthi yam entsha.
Enkosi ngeengcebiso zakho ezixabisekileyo
Isithuba esimangalisayo malunga noyilo lwelogo. Ngokuqinisekileyo ndifumene inkuthazo enkulu kwisithuba esitsha. Enkosi ngetoni ngalo Doug, xmas emyoli!
NgoJanuwari 7, 2020 ngo-4:08 PM
Jun 29, 2021 ngo-9:49 AM
Ezinye iziBonelelo zoYilo lweLogo eziqinisekisiweyo ukuba ziyakukhuthaza